Laynta Dadweynaha iyo Ishortaaga Shaqooyinka Wax Tarka Dadweynaha, Yaa ka Masuul ah! – Rasaasa News
Jul 16, 2009 Jwxo-shiil
Jwxo-shiil oo wata ciidan Eritariyaan ah ayaa lagu sheegay in uu ku sugan yahay Sibi, waxaana hada isaga gacanta ku haya oo amarka siiya ciidanka Eritariya, oo la lee yahay dhibaato ayey ku hayaan dadweynaha Somalida Ogadeeniya.
Jwxo, waxaa lahaa dadweynaha waxayna taageerada ugu badan ka heli jirtay dadweynaha la,aantooda waxaa xaqiiq ah in ayna Jwxo dagaal la gasheen xukuumada Itobiya. Arintaas waxaa xaqiiqdeeda ogg cid walba waayo Jwxo waa Jabhad dadweyne, waan sababta ay ciidamada Itobiya u gumaadeen dadweynaha 2007/08.
Hadab, waxaa soo baxaya arimo aad u fool xun oo ay ku dhamayaan garab Jwxo-shiil, arintaas oo ah mid lid ku ah dadweynaha iyo Jabhadaha kale ee ka dagaalama dhulka Somalida Ogadeeniya. Waxayna colaad aad u xumi dhextaal garabka Jwxo-shiil iyo JXSG, waxaa kale oo ay colaadi dhextaal, garabka ONLF Jwxo-shiil iyo garabka ONLF ee uu hogaamiyo Salaxudiin.
Labadan Jabhadood ee JXSG iyo ONLF salaxdin, colaadi ma dhextaal, xidhiidh wanaagsana waxaa ay la lee yihiin dadweynaha, waayo waxaa ay ku dhaqmaan mabaadi,i u hiilinaysa nolosha dadweynaha Somalida Ogadeeniya, waxayna jecl yihiin wax alaale wixii uu wanaag ugu jiro dadweynaha.
Hadaba, waxaa arintaas wax ka duwan qaba garabka ONLF Jwxo-shiil, waxayna dhibaato ka daran mid ciidamada gumaysiga ay ku hayaan dadweynaha, mana jiraan wax sabab ah oo ku kalifaysa dhibaataynta dadweynaha. Waxa kaliya ee ku kalifaya in ay dhibaateeyaan dadweynaha ayaa ah, iyada oo aan ahayn Jabahad wada danta dadka, balse u adeegaysa xoogaga shisheeye oo aan iyagu doonaynin dadkeenu uu wanaag helo. wanaagaas oo iman kara kolka ay wada shaqeeyaan dadweynaha iyo Jabhadu, laakiin hadii ay colaadi dhextaal labadooda, waxaa xaqiiq ah in uusan halganku siisocon karin.
Dhibaatooyinka laga soo sheegayo Jwxo-shiil, ayaa ah kuwo aanay dadweynuhu u dulqaadan karin, gubida gaadiidka u adeega dadweynaha sida gaadiidka caafimaadka, gaadiidka cuntada qaada, gaadiidka biyaha qaada, kuwa jidadka dhisaya iyo waliba laynta dadka shaqaalaha ah ee qabanaya hawlaha guud ee dadweynaha danta u ah.
Sidda ay sheegayso warbixin laga helay shaqaalaha, ganacsatada iyo dadweynaha ayaa sheegaya in arimaha haatan uu galay Jwxo-shiil ayna ahayn kuwo u danaynaya ummada Somalida Ogadeeniya.
Waxaa la sheegayaa in ay ciidamo Eritariyaan ah ku jiraan gudaha Ogadeeniya oo ay ka Jabhadaynayaan iyaga oo aan cidna u aabo yeelaynin. waxay xoog cuntada kaga qaataan dadweynaha reer miyiga ah, waxayna shan shan xiliga habeenkii ah isu taagaan jidadka, waxayna baadhaan oo ay gubaan baabuurta shacabka.
Waxaa ay habeen hore gubeen 3 baabuur oo iska roga gaadiidka dhismah, waxaa kale oo ay laayeen xoogsatadii la socotay gaadiidka, hore waxaa ay u gubeen Matoorada jidadka sameeya, waxayna dileen Injineero shacab ah.
Waxaa kale oo uu Jwxo-shiil si qabiil ah ugu sheegay ciidanka uu wato oo kuligood beeshiisa ah in ay is qaybiyaan oo ay dhibaato u gaystaan degaanada la dariska, iyaga oo maalintiina ah geel jire caadi ah, kolka ay casarkii tahayna ku caraaba jidadka iyo beelaha la dariska ah.
Dhibaatooyinkaas ka soo cusboonaaday dhulka somalida Ogadeeniya ayaa ay dadweynuhu dhiilo ka muujiyeen iyaga oo leh ma aha dad u dhashay dhulkan ama la dhashay dadkan dadka haatan sheeganaya in ay yihiin Jabhada Jwxo-shiil, balse waa Eritariyaan anaan afkooda garanaynin.
Waxayna dhibaato u gaysanayaan dadweynaha laakiin wax yeelo uma gaysanayaan ciidan Itobiya, Waxaan masuul ka ah arimahan foosha xun Jwxo-shiil iyo kuwo kula socda isaga beel, hadii ay arimahan sii wadaana waxaa si cad uga hor iman doona dadweynaha waxaan soo bixi colaad aan hore uga jirin dhulka Somalida Ogadeeniya.
Bal Is Barbar Dhig Warbixinta Jwxo-shiilo iyo Jwxo-shiilada, Waxaad Oggaan Waxa ay Yihiin